Axmed Madoobe oo agaasimayaasha Jubaland uga digay ku milanka siyaasada - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Axmed Madoobe oo agaasimayaasha Jubaland uga digay ku milanka siyaasada
Axmed Madoobe oo agaasimayaasha Jubaland uga digay ku milanka siyaasada
November 17, 2019 Duceysane374
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kulan la qaatey agaasimayaasha wasaaradaha iyo gudoonka guddiga shaqada iyo shaqaalaha ee Dowlad goboleedka Jubbaland.
Kulankan oo ay ujeedadiisu ahayd hubinta iyo dhageysiga waxqabadka wasaaradaha iyo gudiyada madaxa banaan ee Jubbaland ayaa ka qabsoomey hoolka shirarka ee madaxtooyada Jubbaland ee magaalada kismaayo.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa kadib dhageysiga warbixinta agaasimaayaasha uga mahadceliyey kuna dhiiri galiyey shaqada balaaran ee ay u hayaan bulshada reer Jubbaland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana ballan qaaday in caqabad kasta oo soo wajahda daadejinta adeegyada dowladu shacabka gaarsiiso loo xallin doono sida ugu dhakhsaha badan.
Alshabaab oo Maxkamad ka furtay deegaanka Qaayib.
C/qaasim Salaad “Madaxweyne hore inuu sidaa u hadlo ma haboona, haddii dowladda qalad gasho…”
Al-Shabaab oo weerar ku qaaday Saldhig Ciidan oo ku yaala Deegaan Hostaga Balcad
August 25, 2017 Cali Yare
Daawo: Magaalooyin lacag la,aan ah… Muuqaal Xiiso leh…
Xisbiyada siyaasada dalka oo ku dhawaaqay isbahaysi siyaasadeed cusub